Vaovao - Ny tokony ho fantatrao momba ny fiara elektrika mini EEC
Inona no tokony ho fantatrao momba ny fiara elektrika mini EEC
Nivadika ny onja ary maro amin'ireo Eoropeana no mieritreritra ny hividy fiara elektrika mini EEC.
Miaraka amin'ny fitsitsiana entona sy ny fahatsapan-tena amin'ny ankapobeny amin'ny fahafantarana fa manao ny anjarany ho an'ny planeta izy ireo, dia lasa "ara-dalàna vaovao" manerantany ny fiara elektrika mini EEC.
Tombontsoa amin'ny Mini EEC Electric Vehicles:
1. Ampidiro ao an-trano.
Ny EV rehetra dia tonga miaraka amin'ny tariby fiampangana izay mipetaka amin'ny fivoahana herinaratra 3-pin manara-penitra ao an-tranonao. Ity dia manome karazana "famandrihana miadana" izay afaka mameno ny fiaranao mandritra ny alina raha toa ka ambany indrindra ny faktioran-jiro.
Raha tsy izany, azonao atao ny mividy fitaovana fampandrenesana izay apetraka amin'ny matihanina ao an-trano, manome anao safidy amin'ny "famandrihana haingana".
2. Mitsitsy angovo.
Toy izany koa, amin'ny halavirana 100 kilometatra, ny fiara amin'ny ankapobeny dia mila lasantsy 5-15 litatra, ary ny moto dia mila solika 2-6 litatra, fa ny fiara mandeha amin'ny herinaratra ambany dia mila herinaratra 1-3 kWh eo ho eo.
3. Miaro ny tontolo iainana.
Ny fiara mandeha amin'ny herinaratra dia tsy mamoaka entona misy poizina ary miteraka fahalotoan'ny rivotra, izay tombony lehibe voalohany amin'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra raha oharina amin'ny fiara sy fitaovam-pitaterana hafa.
Fotoana fandefasana: Feb-23-2022